Tag: wordpress negadziriro yeparutivi | Martech Zone
Tag: wordpress negadziriro yeparutivi
Isu Maitiro Ekufamba Isu Kufambisa WordPress Kuisirwa
NeChishanu, Nyamavhuvhu 8, 2014 NeChishanu, Nyamavhuvhu 8, 2014 Douglas Karr
Unoda kufunga kuti kufambisa rako reWordPress saiti kubva kune imwe inomutambira kuenda kune imwe zviri nyore, asi zvinogona kunyatso kuodza moyo. Isu tanga tichinyatso kubatsira mutengi nezuro husiku iyo yakasarudza kutama kubva kune imwe inomiririra kuenda kune imwe uye yakakurumidza kuita musangano wekutambudza. Ivo vakaita izvo zvaiwanzoitwa nevanhu - ivo vakavhara iyo yese kuisirwa, vakaburitsa dhatabhesi, vakaiendesa kune nyowani server uye vakaunza iyo dhatabhesi.
China, Gumiguru 27, 2011 Chipiri, January 29, 2013 Douglas Karr
Maawa ekupedzisira e48 haana kunakidza. Tekinoroji chinhu chinonakidza, asi hachina kukwana. Kana zvikakundikana, handina chokwadi chekuti pane gadziriro chaiyo yaungave nayo… asi iwe unofanirwa kuita. Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti yedu saiti yanga ichitora zvinotyisa kunonoka mavhiki mashoma apfuura. Zvaive zvisinganzwisisike kupihwa chokwadi chekuti isu tinacho pane huru yekubata package inosanganiswa ne database dura uye zvemukati zvekutumira network.